हाम्रो न्याय प्रणाली घुस खाने, धन कमाउने र जागिर खानेका लागि उत्तम छः संग्रौला| Corporate Nepal
साउन १९, २०७७ सोमबार १३:३९
प्राडा युवराज संग्रौला
न्याय सत्य खोज्ने प्रक्रिया हो । अहिले हामीले प्रयोग गरेको न्याय प्रणाली उपनिबेशी न्याय प्रणाली हो। भारतबाट भौतिक उपनिबेश गयो, तर हाम्रा न्याय क्षेत्रमा गाडिएको उपनिबेशी न्याय प्रणाली कहिले पनि कायमै छ । जनताको आस्था न्याय प्रणालीप्रति शुन्य छ । छट्पटि गर्नुबाहेक केही छैन् । यो प्रणाली धुसखाने, धन कमाउने र जागिर खानेका लागि उत्तम हुन्छ । अब आम कानुनविद्ले आफ्ना लागि होइन, जनताको न्यायका लागि काम गर्नुपर्छ। कालो कोटको सम्मान जोगाउनु पर्छ ।
गएको शुक्रबार १५ जना प्राध्यापक तथा वकिलहरुको एउटा छलफल भयो । न्याय प्राणाली र अपभ्रंसित न्यायका बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त भए । अब हात बांधेर बस्न सकिन्न भन्ने कुरा उठ्यो। त्यही दिन हिजो सोमबार ४ बजे छल्फल गर्ने र केही दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा भयो। हिजो ४ बजे बारका पूर्वअध्यक्षहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का, लगायत वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, डा. कुमार शर्मा अचार्य, रबिराज खनाल, सुनिल पोख्रेल, शैलेन्द्र दाहाल, मुक्ती प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भन्डारी, तुलसी भट्ट टिकाराम भट्टराई, माधव बांस्कोटा, युवा कानुन व्यवसायी साथीहरु कपिल ढकाल, जितेन्द्र मडाइ, ज्ञानु गौतम, अमृत खरेल, बाबुराजा शाक्य लागायतका करिव ५० जना साथीहरु हुनुहुथ्यो । थुप्रै छल्फल भए । आउने बुधबार ४ बजे पुनः बस्ने निर्णय पनि भयो । अब न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुनु पर्छ भन्ने कुरामा बिमती रहेन् ।
अदालतमा भ्रष्टाचार छ । बिचौलिया छन् । हिजो गोजीबाट न्यायाधीश टिप्ने काम भयो । असल मानिसको मानमर्दन भयो । न्यायाधीश भएका एक जनाले आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । सेटिङ मिलाउने कार्यका बारेमा रोचक कुराहरू भए । न्यायाधीश हुन कुद्नेका बारेमा पनि कुरा उठे । संसदले के हेरेर न्यायाधीशको नियुक्ति सदर गर्यो ? अब यो कुरा पनि उठ्नु पर्ने कुरा उठे । सुनुवाइका समयमा सांसदका घरमा न्यायाधीसहरु पुगेका, केही सांसदले हात चिल्ला पारेका कुरा पनि उठे।
तपाईंहरुलार्इ अनुरोध छ न्यायपालिकालाई तत्काल सुधार्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस् । मलाई लाग्छ, अब जनता उठ्ने अवस्था भयो । मैले ३६ बर्ष भयो पढाएको । धेरै लखेटाइ पनि खाइयो । आफ्नो ब्यक्तिगत कुरा उठाइन। मैले धेरै नयाँ पुस्तालाई कानुन र न्यायका बारेमा आस्था जगाएँ। अहिले ९० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीहरु कानुन क्याम्पसमा पढन आउन थाले । लोभ लाग्दो नयाँ पुस्ता न्याय क्षेत्रमा आएको छ । मैले उनीहरुलाई निराश हुन दिनुहुन्न।
यदि तपाइँहरुले समयमा ध्यान दिनु भएन भने हामी थुप्रै मानिसले सत्याग्रहतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । न्यायीक जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिन्छ । सबै अपकार्यको खोजी गर्ने बेला भयो।
१. अहिलेसम्म भएका नियुक्तिको जाँचबुझ हुनुपर्छ । असल र योग्यले पाउनुपर्छ । खराबले हट्नुपर्छ।
२. न्यायपरिषदमा सदस्य भएकाहरुले पैसा उठाएका कुरा आएका छन् विगतमा । बासुदेब र मोतिकाजी जस्ता मानिस किन लगिएनन् न्यायपरिषदमा ? को को न्यायाधीशले पैसा बुझाएर न्यायाधीश भए ? भन्ने कुरा सुन्दा पीडा हुन्छ । पैसा केही नेताहरुले समेत लिएका हुन भन्ने भनाइ छ । जाँच हुनुपर्छ ।
३. बारले न्यायपरिषद्मा सदस्य पठाउँदा कानुनबिद होइन, दलका कार्यकर्ता पठायो । त्यो पनि नेताको आदेशमा । किन ?
४. किन बारले न्यायको मर्म बचाउन सकेन् । आज पूर्व न्यायाधीशहरुले बक्तब्य जारी गर्दा पनि, कम्युनिस्ट अध्यक्ष र काँग्रेस महासचिवलार्इ न्यायको पक्षमा बोल्न के ले रोक्यो ? खुलाउनु होस्।
५. यदि तत्काल यसबारेमा प्रष्ट पार्नुभएन भने, म नेपाल बारको आइबिएको काउन्सिलरबाट राजीनामा गर्न बाध्य हुनेछु ।
६. त्यस्ता फैसलाहरु पनि छ्न, जहाँ उस्तै तथ्य भएका मुद्दामा फरक फरक आदेस र फैसला छ्न् । किन तेस्तो भएको हो ? अब जुरिमेट्रिक अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
७. न्यायाधीश नै घुस बोकेर अदालत पुगेका प्रमाणहरु छ्न् । किन त्यस्तो भइरहेको छ ? जवाफ चाहियो ?
८. गरिबले न्याय पाउँदैन। गरिब थुनामै बस्नुपर्छ । किन ?
९. धनीका मुद्दा हप्तैपिच्छे तारिखमा चड्छ्न, तर गरिबको त कहिले पनि पालो आउदैन् । किन ? के गोजीबाट न्यायाधीश निकाल्ने नेताहरुलाई यो थाह छ ?
१०. संबिधानको संशोधन गर्नुपर्ने देखियो ?
११. अब कानुन ब्यबसायीले बारमा छलफल गर्ने बेला भए जस्तो छ । बारप्रति मेरो आस्था छ । त्यो मेरो हित गर्ने संस्था हो । त्योभन्दा बढी न्याय जोगाउने संस्था हो । तर, अहिले बार न्यायाधीश हुने योग्यता प्राप्त गर्ने मन्च बन्यो।
बुधबार ४ बजे होटल अर्याल बानेश्वरमा आएर आफ्नो मत राख्नुहोस्, कसरी न्यायालयलाई पवित्र बनाउन सकिन्छ ? कसरी न्यायको साख जोगाउन सकिन्छ ? कसरी कालोकोटको मर्यादा जोगाउन सकिन्छ ? कसरी अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन सकिन्छ ? बारले बहुदल ल्याएको र बारले राजा ज्ञानेन्द्रको सता हल्लाएको इतिहास छ । राजनीतिक दलले अब न्यायपालिकाको मर्यादा जोगाउने काम थालेन भने, समस्या गम्भीर हुनसक्छ । आम कानुन व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीश हुने लोभ छोडेर न्यायको पक्षमा बारलाई सक्रिय पार्न दवाब दिन र न्यायको दीप फेरि जलाउन आगाडी आउन अनुरोध छ ।
आइसोलेशन डायरी २ः अव्यवस्थाको पराकाष्ठा हेर्न वीर अस्पताल जाऔं
'हुतिहारा कार्यकर्ताहरु ! यति लामो जीवन दास भएर बाँच्नुभन्दा आत्महत्या गर'